Warshad Kiiboodhka Bluetooth | Shiinaha Soosaarayaasha Keyboard-ka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
BADBAADIN BUUXA Ka ilaali hore iyo gadaal kiniinkaaga waxyeellada, xoqida, iyo qubashada. Qolofta dhabarku waxay si ammaan ah ugu haysataa kiniinkaaga kiis khafiif ah oo khafiifa oo xajinaya dhinacyada. HADA TABABARKAAGU WUXUU U SAMEEYI KARAA SIDII LAPTOP KU raaxayso saacado raaxo leh, makiinad dabacsan oo ku mahadsan furayaasha qaabka sissor iyo jajabyo tayo sare leh, sidaa darteed gacmahaagu ma dareemayaan daal. Safarka muhiimka ah ee 2 mm wuxuu bixiyaa qoto dheerida ugu fiican ee xawaaraha iyo raaxada. NOOCA BARNAAMIJKAAGA AMA LAFKAAGA AMA DUKAANKA CAFE Si fudud u fur kiiska a ...
HADA SHAXDAADA LIKE like LAPTOP Qorid raaxo leh oo ay ugu mahad celinayaan furayaasha sissor iyo jajabyo tayo sare leh, sidaa darteed gacmahaagu ma dareemayaan daal. Safarka furaha waa 2 mm, kaas oo bixiya qoto dheer qoto dheer ee xawaaraha iyo raaxada. ISTAGAALAN OO SI FUDUD U SHAQO Grooyinka anti-boodka, kiniinkaagu wuxuu kuxiran yahay meesha saxda ah ee wax qorista oo si adag ayuu meesha ugu jiraa xitaa marka aad wax ku qoreyso dusha sare ee sida dhabtaada oo kale ah. Marka waxaad si fudud u furi kartaa kiiska, oo aad u bilaabi lahayd shaqadaada hal mar. Naqshadaynta MANGETIC Waxaa lagu dhisay magnet xoog badan, th ...
ISKU DARKA QAABKA QALABKA EE QALINKA Loogu talagalay in lagula shaqeeyo qalinka, si aad gacanta ugu qortid qoraalo, sawir gacmeedyo, ama aad dukumintiyada toos ugu calaamadeysato iPad-ka. Waxaa intaa sii dheer, qofka wax heysta wuxuu ku keydiyaa stylus-kaaga sidaa darteed had iyo jeer wuu joogaa markii aad u baahato. QIIMEYNTA BADAN IYO XARUNTA TRACKPAD Ku shaqee saxanka track pad ee barnaamijyada sida note, bogga, miiska tirada iyo muftaaxa. Waxaad awoodi doontaa inaad iftiimiso unugyada waraaqaha, nuqul ka sameyso ereyada, oo aad si fudud ugu saxto emaylka. Si dhakhso leh ula soco waxsoosaarkaaga faraha badan.
Kiis Magnetic leh kumbuyuutar isku dhafan oo loogu talagalay hawo ipad 4 10.9 inch 2020 Wixii hawo ah iPad 4 10.9inch 2020
XAALADDA SIXIRKA SIXIRKA Kiiskan kumbuyuutarka wuxuu isku daraa qolof magneitc ah oo aan naxdin lahayn iyo trackpad sax ah oo leh kumbuyuutar cabbirkoodu dhan yahay oo iPad-kaaga ah. Qolofta shoogga ah ayaa si fiican u xayeysiis ah oo jilicsan oo ku yaal daboolka, waxay bixisaa labalaab ilaalin ah. Taageerada tilmaanta taabashada oo buuxa waxay u beddeleysaa iPad-kaaga mashiin wax soo saar leh oo loogu talagalay ka shaqeynta waraaqaha iyo dukumiintiyada, qalab waxbarasho oo adag oo loogu talagalay fasalo fog, iyo inbadan - fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn. MAALMAHA LAGA HELI KARO SHALLKPROOF SHELL Iyada oo leh xoog xoog leh ...
Fureyaasha wareega kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'ipad' ee loo yaqaan 'Samsung Lenovo Huawei tablet with touchpad'
Nooc cusub oo kumbuyuutar ah adiga oo leh 78unit furayaasha wareega, taabasho dareen wanaagsan oo raaxo leh. Ku raaxayso raaxada iyo raaxaysiga teeb gareynta tekfoonkaaga casriga ah iyo kaniiniga. Ultra-Portable Waa kumbuyuutarka gacanta lagu qaadan karo. Naqshaddeeda khafiifka ah iyo tan fudud waxay kuu oggolaaneysaa inaad meel kasta, waqti walba aad ku qaadato. Way fududahay inaad ku wareejiso gurigaaga garaacista garaacista ee qol kasta, oo aad u aaddo xafiiskaaga, kafeega iyo diyaaradda, kaliya ku qaado inta u dhexeysa bogagga joornaalkaaga, gudaha boorsadaada gacanta. Isku-xidhka fudud ee Bluetooth ...
Kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee wireless-ka ah ipad Samsung Andriod Windows kiniiniyada nidaamka
LA QAADAN KARO KHATAR KHATAR MUHIM AH Kiiboodhka bluetooth-ga ayaa aad u fudud inuu ku xirmo taleefankaaga gacanta, Pad, Apple TV, kiniinno iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay ku rakiban tahay ilbiriqsiyo leh Bluetooth, markaa waxaad si aan kala go 'lahayn u sii wadi kartaa dirista qoraallada taleefankaaga. Ama si dhakhso leh ugu beddel kiniinkaaga laptop-ka oo meel ku qor meel kasta. Xitaa waxay kaa caawin kartaa inaad dhex gasho dhamaan madaddaalada xaruntaada warbaahinta adigoon ka kicin kursigaaga raaxada leh. LIFAAQ QALABKA OO KA FIKIR B weynaan 5mm dhumuc iyo 246mm oo dherer ah, waa furaha telefonka gacanta ...